Iindaba-Yintoni ukuhanjiswa kwamandla kwe-USB?
Nangona kunjalo, lo mbandela wokuhambelana sele uza kuba yinto yexesha elidlulileyo kunye nokwaziswa kweNkcazo yokuHanjiswa kwaMandla kwe-USB. Ukuhanjiswa kwamandla kwe-USB (okanye iPD, ngokufutshane) ngumgangatho omnye wokutshaja onokusetyenziswa kuzo zonke izixhobo ze-USB. Ngokwesiqhelo, isixhobo ngasinye esihlawuliswe nge-USB siya kuba neadaptha yaso eyahlukileyo, kodwa akusekho njalo. Inye ye-USB PD yendalo yonke iya kuba nakho ukunika amandla izixhobo ezahlukeneyo.
Izinto ezintathu eziPhambili zokuHanjiswa kwaMandla kwe-USB?
Ke ngoku ukuba uyazi kancinci malunga nokuba yeyiphi imigangatho yokuNikezelwa kwaMandla kwe-USB, zeziphi ezinye zeempawu ezinkulu ezenza ukuba kufaneleke? Umzobo omkhulu kukuba ukuhanjiswa kwamandla kwe-USB kunyuse amanqanaba emigangatho yamandla ukuya kuthi ga kwi-100W. Oku kuthetha ukuba isixhobo sakho siya kuba nakho ukutshaja ngokukhawuleza okukhulu kunangaphambili. Kananjalo, oku kuyakusebenzela uninzi lwezixhobo kwaye kuya kuba kuhle kubasebenzisi beNintendo Shintsha, njengoko bekukho izikhalazo ezininzi malunga nokutshaja kancinci.
Enye into ebalulekileyo ye-USB PD yinto yokuba amandla ombane awusasebenzi. Kwixesha elidlulileyo, ukuba uyifakile ifowuni yakho kwikhompyuter, iya kuyibiza ifowuni yakho. Kodwa ngoNikezelo lwaMandla, ifowuni oyifakileyo inokuba noxanduva lokunika amandla i-hard drive yakho.
Ukuhanjiswa kwamandla kuya kuqinisekisa nokuba izixhobo azihlawuliswa kakhulu kwaye ziya kubonelela kuphela ngesixa esifunekayo sejusi. Ngelixa uninzi lweefowuni ezikrelekrele zingayi kuba nakho ukusebenzisa amandla ongezelelweyo, ezinye izixhobo kunye neekhompyuter ziya kuba nakho.
Ukuhanjiswa kwamandla-Ukuhambisa ikamva
Ukuqukumbela, lo mgangatho mtsha wokutshaja kwe-USB unokutshintsha umhlaba wetekhnoloji njengoko sisazi. Ngokuhanjiswa kwamandla, uluhlu lwezixhobo lunokwabelana ngeerhafu omnye komnye kunye namandla ngaphandle komnye. Ukuhanjiswa kwamandla kulula kakhulu kwaye yindlela elula yokwenza malunga nokutshaja zonke izixhobo zakho.
Njengoko iifowuni kunye nezixhobo zethu ziqhubeka nokusebenzisa amandla ngakumbi nangakumbi, ukuhanjiswa kwamandla kwe-USB kunokwenzeka ukuba kuxhaphake ngakumbi. Nditsho neebhanki zamandla ngoku zine-USB PD yokutshaja okanye yokusebenzisa izixhobo ezifuna amandla amaninzi (cinga iiMacBooks, iiSwits, iGoPros, iidrones nokunye). Ngokuqinisekileyo sijonge kwikamva apho amandla kungabelwana ngawo.